Pnpkhabar.com | Popular Nepali Portal नवरात्रमा दुर्गाको उपासना गर्दै हुनुहुन्छ ? ध्यान दिनुहोस् यी तीन कुरा - Pnpkhabar.com
नवरात्रमा दुर्गाको उपासना गर्दै हुनुहुन्छ ? ध्यान दिनुहोस् यी तीन कुरा
बिहीबारदेखि बडादशैं तथा नवरात्र शुरु भएको छ । नवरात्रको अवधिभर दुर्गामाताको पूजा आरधाना एवं उपासना गरिन्छ । माता दुर्गालाई शक्ति र उर्जाको रुपमा लिइन्छ ।
नवरात्रिमा पूजा आरधना गर्दा दुर्गा माता प्रसन्न हुने र आर्शिवाद प्राप्त हुने मान्यता रहेको छ । विधिपूर्वक नवरात्रको आराधना गर्दा पुण्य प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ । नवरात्रमा पूजा र व्रत गर्ने छुट्टै नियम छ । यसकालागि तीन चीजको आवश्यकता पर्छ ।
क) दुर्गा पूजाकालागि रातो रंग निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । नवरात्रको पूजामा सर्वाधिक प्रयोग हुने रातो रंग दुर्गा देवीलाई धेरै मन पर्ने रंग भएको हिन्दुधर्ममा उल्लेख छ । त्यसैले घटस्थापना र माता स्थापना गर्न रातो रंगको कपडाले सजाउने गरिन्छ । यसका साथै रातो रंगको कपडा र सिन्दुरको टीका लगाइन्छ ।
ख) नवरात्रको पूजा आरम्भ गर्नुभन्दा पहिले दुर्गामातालाई रातो रंगको पछ्यौरा पनि चढाउनु पर्दछ । हिन्दु परम्परा अनुसार दुर्गा मातालाई रातो पछ्यौरासँगै सिन्दुर वा श्रृंगारको सामग्री, मेवा, फल, मिष्ठान्न, नरिवल जस्ता चीजहरु चढाउनुपर्छ ।
ग) नवरात्रमा दीप प्रज्वलनको पनि विशेष महत्व छ । अखण्ड ज्योतिबाट घरमा सकारात्मक उर्जा प्राप्त हुने र नकारात्मक उर्जा नाश हुने धार्मीक विश्वास छ । तर अखण्ड ज्योति बाल्दा स्वच्छताको भने ख्याल गर्नु पर्दछ । ज्योति जलाउन पित्तल वा माटोको दीयो प्रयोग गर्ने र गाईको घ्यु हाल्नु पर्दछ ।